Ukuhambisa umgangatho ngezinto eziphantsi kokuhambisa umthwalo omkhulu, inkampani yethu yamkela ezona zinto zinxiba kakhulu, ezinganyangekiyo, ezomeleleyo, ezilindeleke ukuba zisebenze ixesha elide. Uyilo lokuhambisa umva ngobukrelekrele obukhulu. Ngamanye amagama, ukufakwa kwayo ...
Ipheyile ye-asphalt isetyenziselwa ukwenza i-roller ukuba yenze inkqubo yokuxinana ngokubonelela ngomaleko womphezulu kunye nokuhambelana okungafaniyo okuzinzileyo. Ukusebenza okuthembekileyo sisiqinisekiso sokuphumeza ezi mfuno. Zonke iipheyinti zeasphalt zale mihla zenziwe ngamacandelo amabini aphambili ...
Amasebe amiselweyo ngokutsha eXinjiang ukuze aBenze bhetele amaZwe amahlanu aseAsia
Ngokwezibalo zamanani amasiko, ixabiso lilonke lorhwebo lwangaphandle lweXinjiang [Ixabiso lilonke lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kurhwebo lwangaphandle eXinjiang libhekisa kwixabiso elipheleleyo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwamashishini eXinjiang kumazibuko esizwe.] Kwiinyanga ezintlanu zokuqala zika-2021 yayiyi-CNY 51.55 yezigidigidi ibonile ...
Incwadana yokuSebenza ye-Ultrasonic Balance Beam
I-36-Beam engaQhakamshelani ne-Ultrasonic Balancing Beam Imiyalelo yokuSebenza eyiMigangatho elungileyo ivela kwi-Specialty Isahluko 1 Imiyalelo yokuSebenza koMlawuli Le nkqubo iqhutywa yimenyu yaseTshayina neyesiNgesi, enomdla kwaye ilungele. Nceda ufunde lo myalelo ...